Isexwayiso ‘komalume’ bamaveni | Isolezwe
Isexwayiso ‘komalume’ bamaveni
Isolezwe / 24 August 2012, 2:40pm /
INHLANZI ishelwe ngamanzi “komalume” abathutha izingane zesikole ngamaveni asebenqunyelwe ugwayi katiki ukuba bawuyeke lo mkhuba kungenjalo bazobhekana kanzima nengalo yomthetho.
AboMnyango wezokuThutha KwaZulu-Natal bathe akukho noyedwa umfundi ovumeleke ukuthi athuthwe ngeveni uma eya noma ebuya esikoleni futhi akhokhiswe imali ngoba lokhu kuphambene nomthetho wezwe wezokuthutha.
Lo Mnyango uthi zikhona izimoto ezigunyazwe ukwenza lo msebenzi ezifaka phakathi amabhasi namatekisi.
Okhulumela uMnyango wezokuThutha KwaZulu-Natal, uMnuz Kwanele Ncalane, uthe baqale ucwaningo ngokubambisana noMnyango wezeMfundo lapho beqoqa khona ulwazi lokuthi zingaki izikole ezisasebenzisa lolu hlelo lokuthutha ngamaveni ikakhulukazi ezindaweni zasemakhaya ukuze kuhlinzekwe ngezimoto eziphephile ezigunyaziwe ukwenza lo msebenzi.
“Abantu abawuyeke lo msebenzi wokuthutha abafundi ngokungemthetho ngoba unomphumela ongemuhle ekugcineni. Sizowaqeda nya la maveni esifundazweni ngoba uma sihlala sibukela isizwe sizobhubha siphele sibhekile,” usho kanje.
Ebuzwa uNcalane ngezinhlelo abanazo zokuthutha abafundi uma kuyekiswa omalume bamaveni, akaphumelanga obala kodwa ugcizelele ukuthi abazali, izikole nama-School Governing Body abaqiniseke ukuthi izingane azithuthwa ngamaveni.
“Umzali akangavumi ingane yakhe ihlohliswe okwesaka lamazambane emotweni ngoba lokhu kubeka impilo yomfundi engcupheni. Ukulayisha ngokweqile futhi ushayela ngesivinini kuyingozi ngakho uma iveni lenza ingozi kuba khona abafayo noma balimale kanzima ngakho awaphephile,” usho kanje.
Lo Mnyango ugcizelela iphuzu lokuqedwa kwamaveni nje kungenxa yengozi yangoLwesibili.
Okhulumela uMnyango wezeMfundo, uMnuz Sihle Mlotshwa, uthe njengamanje basheshisa uhlelo asebeluqalile lokuhlinzeka izikole ngezokuthutha eziphephile ngenxa yokuthi siphezulu isibalo sezingozi ezimbandakanya amaveni athutha abafundi.
Uthe kusezandleni zomzali womfundi ukuthi yena ufuna ingane yakhe ithuthwe ngaluphi uhlobo lwemoto. Ube esebadonsa ngendlebe ethi abaqikelele ukuthi bakhethani.
“Ngeke sithi ‘omalume’ abayeke noma baqhubele ngoba lona wumsebenzi wabezokuthutha ukuthi kube yibo onqumayo ngalokhu. Abantu abashayele ngokucophelela, bahloniphe imithetho yomgwaqo futhi bangalayishi ngokweqile. Ezinyangeni ezimbili ezedlule singcwabe inqwaba yabafundi abashone ezingozini zomgwaqo ngenxa yobudedengu babashayeli,” usho kanje.